Let's talk about IT: JSP သင်ခန်းစာ ၅
[title]Take The Pizza[/title]
[form action="process.jsp" method="post"]
for pizza via our new web form.
[input type="text" name="name" size="30"/]
[textarea rows="4" cols="40" name="address"][/textarea]
[input type="text" name="address" size="70"/]
[input type="radio" name="purchaseType" value="Home Delivery" checked="true"/]
[input type="radio" name="purchaseType" value="Take Away"/]
[h1]Please Select Any Additional Toppings:[/h1]
[input type="checkbox" name="topping" value="Peppers"/]
[input type="checkbox" name="topping" value="Sweetcorn"/]
[input type="checkbox" name="topping" value="Mouse innards"/]
[input type="submit" value="Place Order"/]
http မှာ GET, POST,DELETE,TRACE အပါအ၀င် တခြား method တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ jsp အပါအ၀င် server side programming laguage တွေမှာတော့ Get နဲ့ Post ကိုပဲ အဓိကသုံးကြပါတယ်။ get method ကို အသုံးပြုရင် url မှာ parameter တွေကိုမြင်ရပါတယ်။ url ရဲ့ character limitation လည်းရှိပါတယ်။ parameter တွေသိပ်များနေရင် url ရှည်လာပြီး limit ကျော်တဲ့ပြဿနာရှိနိုင်သလို၊ plain text နဲ့ value တွေကို url မှာမြင်နေရတာလည်း security အရမကောင်းပါဘူး။ post မှာတော့ ဒီပြဿနာမရှိပါဘူး။ url ထဲမှာလည်း parameter တွေမပြသလို၊ url limitation ကျော်တာမျိုးလည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။
ဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ form တစ်ခုမှာ action နဲ့ method ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ action ဆိုတာကတော့ ဒီ form ကို submit လုပ်လိုက်ရင် ဘယ်သွားမလဲဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လို့ action="http://google.com" ဆိုရင် form ကို submit လုပ်တဲ့အချိန်မှာ google.com ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ အခုဒီနေရာမှာ process.jsp ဆိုတဲ့အတွက် process.jsp ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ process.jsp ရှေ့မှာ ဘာမှထူးထွေညွှန်ပြမနေတဲ့အတွက် အခု pizza.html နဲ့folder တစ်ခုတည်းမှာရှိတယ်လို့ယူဆရပါမယ်။ method="post" ဆိုတဲ့နေရာမှာ method="get" နဲ့လည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ method ကိုမထည့်ဘဲ စမ်းကြည့်ရင် get မလား post မလားဆိုတာလေးလည်း စူးစမ်းသင့်ပါတယ်။
[p]Thank you for ordering.[/p]
ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုတွေ့ရပါမယ်။ ဟိုဘက်ကနေပို့လိုက်တဲ့ parameter တွေကို ဒီဘက်ကနေပြန်ကြည့်တာပါ။ ဒါမျိုးတွေကို confirmation page တွေမှာသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ သေချာပြီလား ...၊ ဒါတွေမှန်တယ်နော်ဆိုပြီး ပြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ $ sign လေးနဲ့ paramater တွေကို ပြန်ထုတ်ပြီး ပြတာမျိုးပါ။ Servlet မှာရေးရေးနေတဲ့ HttpRequest ရဲ့ getParameter ဆိုတဲ့ method ပါပဲ။ အတိုလေးပဲရေးရတာ လက်ညောင်းသက်သာပါတယ်။
ဒါကို EL နဲ့ရေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာ %% နဲ့တစ်ခုရေးပြခဲ့တာတွေ့မှာပါ။ အဲဒါကိုကြတော့ scriptlet လို့ခေါ်ပါတယ်။ scriptlet ကို အကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့် မသုံးသင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်က horribly structured and difficult to maintain ပါ။ ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ java code ဗလပွနဲ့ဆိုရင် ရေးတဲ့သူတောင် code လိုင်း နှစ်ရာလောက်ဆိုရင် စပြီး အူလည်လည်နဲ့ရှာရတော့ပါမယ်။ အဲဒီလူ အလုပ်ထွက်ပြီး နောက်ဝင်လာတဲ့သူကတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ရှေ့ကလူကို မေတ္တာပို့နေပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်က Designer တွေအတွက် မျက်စိနောက်လို့ပါ။ သူတို့ရဲ့ design process မှာ java code တွေက မျက်စိနောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ညစ်ပတ်နေသလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် scriptlet ကို မသုံးဖို့ မေတ္တာရပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူမှာတော့ နားမထောင်ဘူးခင်ဗျ။ ကြုံသလိုရေးကြပါတယ်။
ဒါလေးကိုကြည့်ပြီး pizza မှာကြည့်လို့ရပါပြီ။ html code တွေကိုတော့ အထွေအထူးမရှင်းတော့ပါဘူး။
http://localhost:8080/jsp-example/pizza.html မှာ pizza မှာကြည့်လိုက်ပါဦး။
Posted by Zero Divided by Zero is Zero (Brahmagupta Rule) at 7:17 AM